အတူနေခြင်း၏ ကျန်းမာရေးအာနိသင်များ ? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဟိုးကမ္ဘာဦးလူသား အာဒံ နဲ့ ဧဝဆီက ရခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအမွေက ခုထိ လူသားတွေအတွက် လတ်ဆတ်ချိုမြ ပျော်စရာကောင်းနေဆဲ။
အဆုံးမဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်သလို လူသားမျိုးနွယ်တည်တံ့ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ နှစ်ဦးသား အတူနေခြင်းမှာ အိပ်ရာပေါ်က ပျော်စရာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ခံစားချက်တွေအပြင် လူတွေ သိပ်မသိသေးတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
? ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ပိုကောင်းစေတယ်
တစ်ပါတ်မှာ နှစ်ကြိမ်လောက် အတူနေဖြစ်တဲ့ စုံတွဲတွေမှာ ရောဂါပိုးမွှားတွေကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ Immunoglobulin A(IgA) ပိုများတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလိုပါပဲ။ အကြိမ်ရေ သိပ်များသွားရင်တော့ stress ကြောင့် ဒီအကျိုးကျေးဇူးမရတော့ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားတက်စေတယ်ဆိုပြီး အတူနေဖို့ပဲ မောင်းတင်နေလို့တော့မရပါဘူး။
– အိပ်ချိန်ပြည့်ဖို့ နဲ့
– အဟာရပြည့်ဝအောင် စားသောက်ဖို့ကတော့ ပထမဦးစားပေးပါ။
? ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေတယ်
အတူနေတဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့ အထွတ်အထိပ် orgasm အခြေအနေမှာ ထွက်လာတဲ့ Prolactin, Oxytocin နဲ့ Endorphins ဟော်မုန်းတွေရဲ့ အာနိသင်ကြောင့် နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပါတယ်။ ပြည့်ပြည့်ဝဝ အိပ်မောကျစေခြင်းက ကိုယ်ခံအားပိုကောင်းစေသလို အသက်လည်း ပိုရှည်စေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အလွယ်တကူ အပေါ်သွေးလို့ ခေါ်ကြတဲ့ နှလုံးကြွက်သားတွေ သွေးကိုညှစ်ထုတ်လိုက်ချိန်သွေးဖိအားဖြစ်တဲ့ systolic blood pressure ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
? ခေါင်းကိုက်သက်သာစေသလို ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေလည်း သက်သာလျော့ပါးစေတယ်
ကိုက်ခဲနေရင် အတူနေချင်စိတ်ရှိဖို့တော့ မသေချာပေမဲ့ အတူနေဖြစ်လို့ ဆန္ဒပြီးမြောက် orgasm ရောက်ခဲ့ရင်တော့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာ၊ အရိုးအဆစ်ကိုက်ခဲတာ၊ ရာသီမလာခင်နာကျင်ကိုက်ခဲတာ၊ စတာတွေ သက်သာစေပါတယ်။
? ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းစေတယ်
နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်စေပြီး ကြွက်သားတွေအများကြီး အသုံးပြုရတဲ့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလိုဖြစ်စေပြီး တစ်မိနစ်ကို ၅ကယ်လိုရီလောက် လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
? Heart Attack အန္တရာယ်လျော့စေတယ်
Estrogen နဲ့ Testosterone ပမာဏတွေကို မျှတအောင် ထိန်းညှိပေးတာကြောင့် ရေရှည်မှာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
သုတေသနတစ်ခုအရ တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ်အတူနေဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ အတူမနေဖြစ်သူတွေထက်စာရင် နှလုံးရောဂါကြောင့် သေနှုန်းကို ထက်ဝက်ထိ လျော့စေတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
သုတေသန တစ်ခုအရ တစ်လမှာ ၂၁ကြိမ်ထက်မနည်း သုတ်လွှတ်ခြင်းက ဆီးကြိတ်ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ကင်ဆာဖြစ်စေမဲ့ ဆေးလိပ်၊အရက် နဲ့ တခြား အစားအသောက်တွေ မှားယွင်းတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို ပြုပြင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
– pelvic floor ကြွက်သားတွေကို ပိုသန်မာလာစေတာမို့် သိပ်အဖြစ်များတဲ့ ဆီးမထိန်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
– ရာသီမလာခင်နဲ့ ရာသီလာစဉ် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
? အတူနေတဲ့ချစ်ခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ အများကြီးပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်း လျော့ကျစေသလို နှစ်ဦးသား အပြန်အလှန် သံယောဇဉ်၊ နားလည်မှုနဲ့ အချစ်တွေလည်း တိုးပွားစေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဗိုက်ထဲကိုလည်း ကလေးပိစိလေးတွေပါရောက်လာပြီး မျိုးဆက်ပါ တိုးပွားလာနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးချိန်မှာ သန္တေတားဖို့၊ သားဆက်ခြားထားဖို့ နည်းလမ်းတွေလည်း လေ့လာ သိရှိ လိုက်နာကြဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
အတူနေခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေနောက် သဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရင်းနဲ့ လိင်ကတစ်ဆင့်ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်မလာဖို့လည်း အမြဲသတိရှိရပါမယ်။
မေတ္တာအပြည့်နဲ့ သစ္စာရှိရှိ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။